Valentine’s day အတွက် နားထောင်သင့်တဲ့ သီချင်းလေးတွေ
On February 7, 2018 By fairy
ကဲ Valentine’s day ရောက်တော့မှာဆိုတော့ ယူတို့ အားလုံးလဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ Vday အတွက် feel လို့ ကောင်းမယ့် သီချင်း list လေး လုပ်ထားတာမို့ အားလုံးလဲ စိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်လို့ ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
လူကြိုက်များခဲ့တဲ့သီချင်းတွေနဲ့ အရင်တုန်းကသီချင်းတွေ အခုလက်ရှိ hot နေတဲ့ သီချင်းတွေလဲပါတာမို့ ကိုယ်နားမထောင်ဘူးတဲ့ သီချင်းတွေပါရင် နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်။ အကြိုက်ချင်းတူတာရှိရင် shake လိုက် recommend ပေးချင်တဲ့ သီချင်းရှိရင်လဲ အားလုံးသိရအောင် ပြောပြပေးသွားပါအုန်းနော်။
1 – Love Story (Taylor Swift)
Romeo နဲ့ Juliet အကြောင်းလေးရိုက်ထားတဲ့ MTV နဲ့ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ သီချင်းပါ။ ခုထိလဲ youtube မှာ ကြည့်ရှုနှုန်းတက်နေဆဲဖြစ်ပြီး admin ငယ်ငယ်ကဆို သီချင်းစာသားကို အလွတ်လိုက်ကျက်ခဲ့ဖူးပါတယ်(ရူးချက်နော်?)။ ဝတ္ထုထဲမှာ မညားခဲ့ကြပေမယ့် ဒီသီချင်း MTV ထဲမှာတော့ happy ending ဖြစ်တာမို့ စိတ်ကြည်နူးစရာလေးပါနော်။
2 – We found Love (Rihanna)
ဒီသီချင်းလေးရဲ့ အသက်ကတော့ သူ့ရဲ့ chorus ပိုဒ်ဖြစ်တဲ့ “We found love in hopeless place” ဆိုတဲ့ စာသားလေးတစ်ကြောင်းပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ မျှော်လင့်စရာဘာတစ်ခုမှမရှိတာကနေ အချစ်ကိုတွေ့ခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိရင် သိမ်းတောင်ထားရမယ့်သီချင်းလေးပါနော်။
3 – The Power of Love (Celine Dion)
ဒီသီချင်းလေးကတော့ Celine ဆိုပြီးတဲ့နောက် အရမ်းပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် မူရင်းအဆိုတော်ကတော့ Jennifer Rush ဖြစ်ပါတယ်။ Jennifer Rush ရဲ့ တကယ့်ရင်တွင်းဖြစ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး သူ့ချစ်သူ Steve အတွက်ရည်စူးပြီး ညွှန်းဖွဲ့သီဆိုခဲ့တာပါ။ ရင်ထဲကခံစားချက်အစစ်အမှန်တွေကို စကားလုံးတွေနဲ့ သီချင်းတွေအဖြစ်ချပြထားတာမို့ heart ထိစေမှာပါနော်။
4 – I just called to say I love you (Stevie Wonder)
ဒီတစ်ပုဒ်ကတော့ နဲနဲတင်စားဖွဲ့နွဲ့တဲ့သီချင်းပေါ့နော်။ ရက်ထူးရက်မြတ်တွေ၊ ချောကလက်တွေပန်းစီးတွေ ပကာသနတွေမလိုပါဘူးတဲ့ မင်းကိုချစ်တယ်လို့ပြောချင်တာတစ်ခုတည်းပါတဲ့… ရိုချက်ပဲနော် စကားလုံးတွေကတော့။ admin ကတော့ ချောကလက်တွေပန်းစီးတွေပါရင်ပိုရိုမလားလို့ ??
5 – Perfect (Ed Sheeran)
နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ်ပါပဲ။ ဒီ Perfect ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို Ed Sheeran က သူ့လက်တွဲဖော်ကောင်မလေးကိုရည်စူးပြီး ရေးခဲ့တာပါ။ ကိုယ့်ကိုတစ်လျှောက်လုံးစောင့်နေခဲ့သူ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီဆိုမှတော့ လက်လျှော့ဖို့ လုံးဝမစဉ်းစားနဲ့တော့နော်။ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာတော့ ကိုယ့်ချစ်သူလေးသော အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်နေတယ်မလား?? အဆင်ပြေရင်ချစ်သူလေးကို mention ခေါ်သွားကြနော်…….
တခါတလေကျရင် ကိုယ်က တကယ်ချစ်ပေမယ့် ပါးစပ်ကနေပြောမထွက်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သီချင်းလေးတွေပို့ပေးတာမျိုးကလဲ အလုပ်ဖြစ်တယ်နော်။ ချစ်သူမရှိဘူးဆိုရင်လဲ အားငယ်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့် Crush လေးသိအောင် ဒီသီချင်းတွေက ကူညီမှပါ။
အားလုံးပဲ ချစ်သူများနေ့မှာတင်ပဲမဟုတ်ပဲ နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ……
PREVIOUS POST Previous post: ‘Twilight Theme’ လေးနဲ့ Taeyang နဲ့ Min Hyorin တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်
NEXT POST Next post: သူတို့က BTS ပရိသတ်တွေပါလို့ Backstreet Boys အဖွဲ့ဝင်တွေပြောကြား